Ingabe Ngukuzibandakanya Ngempela? | Martech Zone
Ingabe Ngukuzibandakanya Ngempela?
NgoLwesine, ngo-Okthoba 3, 2019 NgoLwesine, ngo-Okthoba 3, 2019 Douglas Karr
Uma ngikhuluma nentombi yami ngaphezulu kwama-83% kulenyanga kunangenyanga edlule, ngabe ngi ukuzibandakanya kakhulu? Kuthiwani uma ngenza imibono embalwa ngaye? Ingabe ngithembisene umshado?
Izincazelo zokuzibandakanya zicacile.
(1) Isivumelwano esisemthethweni sokushada.
(2) Ilungiselelo lokwenza okuthile noma lokuya endaweni ethile ngesikhathi esinqunyiwe.
Incazelo Yokuzibandakanya ye-Merriam Webster
Ngaphezulu kwe- eminyakeni eyishumi edlule, Ngiqale ngashicilela le rant ebengifisa ukuthi abathengisi bayeke ukuveza leli gama lwekucocisana njengemethrikhi yebhizinisi. Namuhla kuseseyinkinga embonini yethu ngakho ngiyilandelile ngevidiyo engezansi.
Isikhathi esilinganiswe ekhasini, inani lamazwana, inani labalandeli, inani lamavoti, noma nenani lamaminithi wamavidiyo abukiwe alisizi ibhizinisi lakho ngaphandle kokuthi uqondanise i- lwekucocisana kuya kwangempela umphumela webhizinisi. Uma ungakwazi, kumane nje kube yi- imitha eliyize.
Namanje ngisakhala ngokuxhashazwa kwethemu lwekucocisana namuhla ngoba ngibona amaklayenti amaningi kakhulu echitha izizumbulu zemali kokuqukethwe okunganikeli ngenzuzo yebhizinisi.
Akunjalo lwekucocisana, kunjalo ukuphola. Futhi lokho akusho ukuthi abathengisi akufanele balandele uhlobo oluthile lokuxhumana phakathi kwababukeli, abalandeli, abalandeli, abalaleli, njll. Kufanele. Kepha abathengisi kumele ekugcineni baqondanise lokho kuhlangana nemiphumela yangempela yebhizinisi.
Ukuqomisana yinoma yimuphi umsebenzi womphakathi owenziwa, imvamisa, abantu ababili ngenhloso yokuthi ngamunye ahlole ukufaneleka komunye njengomlingani wabo.
Uma izivakashi zakho zichitha isikhathi esiningi kusayithi lakho, siyakuhalalisela! Uthandana kakhulu futhi kuyisibonakaliso esihle… kepha akusikho ukubandakanyeka. Lapho isivakashi sakho sithenga indandatho bese siyifaka emunweni wakho, ngitshele ukuthi usuthembisene umshado. Lapho inani lalezo zivakashi landa futhi bathenga okuningi kuwebhusayithi yakho, ungangitshela ukuthi ukuzibandakanya kwakho kuyanda.
Abathengisi abangakwazi Linganisa ukubuya kokutshalwa kwemali ngemithombo yezokuxhumana sebenzisa amagama afana nokubandakanya ukwenza imizamo yabo ibe semthethweni futhi wow amakhasimende abo… ngenkathi bemosha imali yabo.
Ngenkathi uJeffrey Glueck enza inkulumo yokuvula engqungqutheleni ye-eMarketing Association eminyakeni eyishumi eyedlule, wakhuluma indaba enhle kakhulu Travelocity ukuqala umkhankaso wezokuxhumana usebenzisa i- gnome futhi MySpace.
Ngamazinga wokuzibandakanya, umkhankaso ube yimpumelelo enkulu… wonke umuntu waba nobungane ne-gnome namazwana nezingxoxo zindiza! Abantu bachithe isikhathi esiningi ekhasini futhi bekukhona ithoni yokuvezwa. Ngeshwa, noma kunjalo, lo mkhankaso wabiza u- $ 300k futhi wehluleka ekushayeleni ibhizinisi kwaTravelocity. Ngamanye amagama… akukho ukuzibandakanya.
PS: Phawula ... Nginentombi kodwa asithembisananga.
I-PPS: Siyabonga ku I-Ablog Cinema ngokukhiqiza le vidiyo emangalisayo! Lesi ngesesibili ku Izinganekwane, imiqondo eyiphutha, kanye namaRantshi chungechunge.
I-Sidecar: Izindlela Zokukhangisa Eziqhutshwa Idatha
I-3D Visualization + CPQ Ishayela Kanjani Ukuthengisa
Ngo-Apr 25, i-2009 ku-8: 52 AM
Nkosi enhle… Ngicishe ngawa esihlalweni sami ehhovisi ngemuva kokufunda isihloko salokhu okuthunyelwe. Ithrafikhi ayinandaba nokuhamba kwesikhathi .. ukuthengisa yilokho okubalwayo .. Imali engenayo. Imali engenayo. Imali engenayo.
Ngo-Apr 25, i-2009 ku-12: i-51 PM
Siyakuhalalisela ngokuletha uStephen ebhodini. Ungumuntu omkhulu futhi ngiyajabula ukuthi ujoyine nina bafana… ngicabanga ukuthi niyomangala ukuthi ungena kanjani futhi alinganise izinto.
Re: lokhu. Ngicabanga ukuthi ukwakha ubudlelwano namakhasimende akho namakhasimende kubaluleke kakhulu - futhi ezinye izinto kunzima kakhulu ukuzikala. Esinye sezizathu zokuthi kungani ngikuthanda ukubhuloga nemithombo yezokuxhumana kakhulu ukuthi NGINGABE obala, ngingathembeka, ngikwazi ukunakekela amakhasimende ami kakhulu - kodwa ngaphezu kwakho konke - NGIYAZI ukuthi zonke lezo zinto bezinzima ukukala ngaphambili kuyalinganiswa manje.
Ngifuna ukuphonsela inselelo abathengisi ukuthi banikeze amaklayenti abo ifanele ebonakalayo ebanikeza ubufakazi bokuthi kuholela ku-b, b kuya ku-c, naku-c kuya ku-d. Lapho amakhasimende ethola ukuthi ukuvuleka, ukwethembeka nokutholakala… kuzoba ngcono ngakho! Kumele nje sikufakazele lokho.
Kuhle ukukubona lapha! Uza nini kwi-The Bean Cup?
Ngo-Apr 25, i-2009 ku-11: 44 AM
Mhlawumbe sizongena empikiswaneni yama-semantic lapha, kepha ngicabanga ukuthi kufanelekile ukuba nayo.
A. Kubukeka sengathi ukuzibandakanya kungumcimbi wobunye ekufaniseni kwakho (noma okungenani umcimbi odalwe ukuthengwa kuphela). Ngingasho ukuthi enye incazelo yokubandakanya "ukudonsela ngaphakathi noma ukubandakanya" umuntu engxoxweni noma ebudlelwaneni. Ukubandakanyeka akuyona into eyedwa noma imbala. Ubudlelwano obuncane obuphelela ebudlelwaneni obunothile phakathi kwenkampani namakhasimende. Kuyancipha ibanga phakathi kwabo.
B. Ngasinye salezi zinkulumo "zokuzibandakanya" ozibhalayo singalinganiswa futhi nami, ngichaze njengokubandakanya. Lapho engabelana khona ngokungabaza kwakho kulapho ngayinye yalezi zinkulumo zilinganiswa ngenxa yazo. Ukuthi othile ushiya amazwana akusho ukuthi basondele ekuthatheni isenzo esichazwe njengebhizinisi njengokuthenga. Izenzo zokuzibandakanya kufanele zakhele emphumeleni wokugcina odingwa yibhizinisi. Ukumaketha kumele kuqedele le ndlela (imvamisa engeyona eyomugqa). Isibonelo, lapho iTravelocity yehlulekile khona bekumane nje kwakha umkhankaso wokuqwashisa opholile ngaphandle kokucabanga ukuthi ukuzibandakanya kwamakhasimende ngakunye kungamenza kanjani lowo muntu aqedele umgomo wokugcina.
C. Uma sifuna ukusebenzisana nesifaniso sakho… Angicabangi ukuthi izinkampani zonke zithola indandatho kumakhasimende azo. Izinkampani kufanele zihlale zifuna ikhasimende, lihlanganyele nazo, zakhe ubuhlobo obusha nazo. Uma inkampani icabanga ukuthi ekugcineni bahambise amakhasimende abo phansi emshadweni, bazomangala ngempela ukuthi isehlukaniso sishesha kangakanani esithombeni sabo.
Uxolo ngamazwana anomoya omude, kepha ngiyakholelwa ukuthi ukuzibandakanya kuyimethrikhi ebalulekile yokumaketha nokuthi ingakhiwa kahle kakhulu. Umbono ohlukile.
Ngo-Apr 25, i-2009 ku-12: i-37 PM
Impendulo enhle nengxoxo enhle. Ngaphakathi kwempendulo yakho, ngingawuphonsela inselelo umbono wokuthi noma imiphi yale micimbi 'iholela' ebudlelwaneni bemali. Ngikhombise ifaneli yokuthengisa yenkampani eyodwa enikeza ubufakazi bokuthi izindlela eziyinhloko zokwenza abantu bathenge ebhizinisini lakho ziqala ngokuthi baphawule ngebhulogi yakho… noma ukuthi kunobudlelwano phakathi kwenani labalandeli onabo nesabelomali sakho sokumaketha.
Ngicabanga ukuthi ukukhungatheka kwami ​​kulele ekutheni abantu bakholelwa ukuthi lokhu sekuba uhlobo oluthile lwenkomba yokusebenza mbumbulu yamabhizinisi. Njengomakethi, ngidinga ukuhlinzeka nge-EVIDENCE nedatha yokuhlaziya ekhombisa ubudlelwano besizathu nomphumela phakathi kwalezi zinto nokuthengwa kwangempela. Kuze kube manje, ngicabanga ukuthi yi-bs
Ngo-Apr 25, i-2009 ku-7: i-45 PM
UDoug, lesi yisifaniso esihle, futhi ngiyavuma ukuthi 'ukuzibandakanya' kusetshenziswa ngokweqile futhi kugugile. Ekugcineni abathengisi kumele bagxile kulokho okuqhuba ibhizinisi futhi okuletha kubantu ababucayi ngokunikela ngemali yabo ngemikhiqizo nezinsizakalo zakho. -UMichael